စပျစ် စိုက်ပျိုးသူများ နည်းပညာ အကူအညီနှင့် ခိုင်မာသော ဈေးကွက်ရရှိရေး တိုင်းဒေသကြီး အစိုး?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ မတ် ၁ဝ
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ စပျစ်စိုက်ပျိုး ရောင်းချသူများအား နည်းပညာအကူအညီနှင့် ခိုင်မာသော ဈေးကွက်ရရှိအောင် ယခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးသန်းက ပြောကြားသည်။
”ဒုသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ရမည်းသင်းမှ ပုဂ္ဂလိက စပျစ်ခြံ တွေ ဝင်ကြည့်စဉ် သူတို့အနေနဲ့ ဝိုင်ထုတ်နိုင်တဲ့ စပျစ်မျိုးတွရရှိဖို့ ဒုသမ္မတကိုတင်ပြတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့အနေနဲ့ စပျစ်စိုက်ပျိုးနည်း ပညာတွေ ဝိုင်ချက်နည်းပညာတွေ ရရှိဖို့ ဝိုင်စက်ရုံတွေ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာက စက်ရုံတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ ဒီနှစ်ထဲ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရှိ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ဆယ် ပေါက်၊ မိတ္ထီလာ၊ ရမည်းသင်း ဒေသများမှ စပျစ်စိုက်ပျိုးတောင်သူများအနေဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ စပျစ်စိုက်ပျိုး နည်းစနစ်၊ ဝိုင်ထုတ်နည်းစနစ်များ တောင်းခံလာပါက ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
”စပျစ်စိုက်မယ်၊ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ စပျစ်ကို ဝိုင်ထုတ်မယ်၊ သူတို့လက်ရှိ အခက်အခဲဖြစ်နေတာ မြေယာ အသုံးချခွင့်ပါ၊ ဒီကိစ္စကိုလည်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးသွားမှာပါ၊ ဝိုင်ထုတ်နိုင်သော စပျစ်သီးမျိုး များ ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါက ဈေးကွက်အလားအလာရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ ဒုသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ရက်က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်းမြို့နယ် ဆည်းထိပ်ကျေးရွာ ရှိ စပျစ်ခြံတချို့၏ စိုက်ပျိုးထား မှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ ပြီးနောက် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးသန်းက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် နည်းပညာရရှိရေး၊ ဈေးကွက် ရရှိ ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မန်စီမြို့နယ်တွင် တရားမဝင် သစ်တင် တုန်ဖန်းမော်တော်ယာဉ် တစ်စီး ဖမ်းဆီးရမိ
ရာဇဝတ်သားများကို မိမိကိုယ်တိုင် ပစ်သတ်မည်ဟု ဒူတာတေပြော
ကာတာလိုနီးယား လွတ်လပ်ရေး ကြေညာချက် အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးသော်လည်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆိုင်
မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကိုင်ချင်သော ပြည်သူများ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်ရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပ?
ဝိတ်ချနေရချိန်မှာ အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ စားခွင့်ရတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ G Friends အဖွဲ့
”ဟာသကိုပဲ ပေါပေါပဲပဲ မဖြစ်သွားအောင် ကြိုးစား ရိုက်ကူးပါတယ်” Kညီ